ကောင်းမွန်ဝင်း: 8/1/09 - 9/1/09
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Monday, August 31, 20090ကောင်းမွန်ဝင်းအတွက် ဤပို.စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Sunday, August 30, 20090ကောင်းမွန်ဝင်းအတွက် ဤပို.စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Wednesday, August 26, 20093ကောင်းမွန်ဝင်းအတွက် ဤပို.စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
သမီးတို.ပြီးခဲ့တဲ.အပါတ်တနင်္ဂနွေနေ.က အိမ်နဲ.နှစ်ဘူတာဝေးတဲ့ ပန်းခြံ(အဲဒီပန်းခြံက ပင်လယ်နဲ.ဆက်နေလို.၊တကယ်ကတော့ သားငယ်လေးရေဆော့ဘို. သွားခဲ့တာပါ။)
ကို သွားခဲ့တဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို ထဲ့ပေးထားတယ်နော်။
အိမ်ကနေမြေအောက်ရထားနဲ. နှစ်ဘူတာစီးပြီး အဲဒီဘူတာကနေ နောက်ထပ်ဘတ်စ်ကားနဲ.သွားရတယ်။
ပန်းခြံအ၀င်ဝရေပန်းနဲ. ပန်းခြံထဲက ရဟတ်
ပန်းခြံထဲကနေ ပင်လယ်ဘက်သွားတဲ. လမ်းမကြီး
ပင်လယ်နဲ.ပန်းခြံကိုအပေါ်စီးကနေကြည့်လို.ရအောင်ဆောက်ပေးထားတဲ. နေရာကနေ ပင်လယ်ကို မြင်ရတဲ့ပုံ
အဆောက်အဦရဲ.(၃)ထပ်၊ ကြမ်းအောက်မှာမြင်ရတဲ. အပေါက်ဝိုင်းလေးတွေက လေအေးပေးစက်လေ။နံရံနှစ်ဘက်စလုံးနဲ. အမိုးကမှန်တွေချည်းပဲဆိုတော့ လေအေးစက်ကို ကြမ်းမှာမြှုပ်ထားတာ။
ပင်လယ်ကိုကြည့်တဲ. အဆောက်အဦကို အပြင်ဘက်ကမြင်ရပုံ၊
နေ.လည်စာကိုသားအတွက်အိမ်ကနေယူသွားပြီး သမီးတို.ကတော့ အဲဒီမှာစက်နဲ.ရောင်းတဲ့ ခေါက်ဆွဲပြုတ်ဘူးကိုဝယ်စားတယ်။
သူ.အတွက်ယူလာတာတင်မကဘူး ၊ သမီးစားတဲ. ခေါက်ဆွဲပြုတ်ပါထပ်စားတယ်။
ပင်လယ်ဘက်ကိုထွက်လာတော့ သားငယ်လေးက ဗိုက်ပြည့်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်။
အဲဒီတနင်္ဂနွေနေ.က လူတွေတော်တော်များတယ်။ကလေးတွေနဲ.မိသားစုတွေပေါ.။ ဒီနေရာကပင်လယ်ဆိုပေမယ့် ရေဆော့ဘို.အတွက်ပဲ။ ရေမကူးရဘူးလေ။
ဒီလိုနေရာမျိုးကိုလာရတာ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ရှိပြီး မိသားစု အတွက်တော့
သားငယ်လေးအိပ်ရာနိုးတော့ ပင်လယ်ရေထဲ ခေါ်သွားတယ်။
ဒီလိုနဲ. အားလပ်ရက်တနင်္ဂနွေကို မိသားစုနဲ.ပျော်ရွှင်စွာကုန်လွန်စေခဲ့ပါတယ်။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Tuesday, August 25, 20090ကောင်းမွန်ဝင်းအတွက် ဤပို.စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Monday, August 24, 20090ကောင်းမွန်ဝင်းအတွက် ဤပို.စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Thursday, August 20, 20090ကောင်းမွန်ဝင်းအတွက် ဤပို.စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်တာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်စုမိလဲ။ လခဘယ်လောက်ရလဲ။
ဂျပန်မှာ သာမန်လခစား ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်၊ လခဘယ်လောက်ရလဲ။ဂျပန်မှာနေတာ ကုန်ကျစားရိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ အဲဒါတွေကို ခန်.မှန်းသိရှိနိုင်အောင် နမူနာအုပ်စုလေးတွေနဲ. အသက်၃၀၀န်းကျင် ဂျပန်လူမျိုးလခစားတစ်ယောက်ရဲ. ၀င်ငွေထွက်ငွေတွေကို ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
နံမည်က ယာမာ့ဂိရှိ စံပါ။
ဘွဲ.ရပြီး အိုင်တီနှင့်ဆိုင်တဲ. ကုမ္ပဏီ မှာအလုပ်ဝင်ပြီးလုပ်သက်၃နှစ်၆လ၊ အဲဒီနောက်အခုအလုပ်လုပ်နေတဲ. ကုမ္ပဏီကိုထပ်အလုပ်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ အဓိကတာဝန်ကတော့(System Engineer) စစ်စတမ်အင်ဂျင်နီယာပါ။ တစ်ယောက်တည်းနေတာ ၂နှစ်လောက်ရှိပါပြီ၊ အိုဆားကားမှာနေပါတယ်။ ၀ါသနာကတော့ စာဖတ်ခြင်းနှင့် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာပါ။ အားလပ်ရက်တွေမှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ. သွားသောက်လိုက်၊စာကြည့်တိုက်သွားလိုက် ရုပ်ရှင်ရုံသွားလိုက်နေတာများပါတယ်။ တေးဂီတကိုလည်း နှစ်သက်ပါတယ်။ အားတဲ.အချိန်တွေကို အခန်းတွင်းမှာအချိန်ဖြုန်းလေ.ရှိတဲ. အင်ဒိုးသမားပါ။အခုလောလောဆယ် စုငွေ ယန်းသိန်း၂၀ရှိပါတယ်။
လစာတွက်ချက်ပုံ (အခြေခံလစာ ၂၆သောင်း+၊ လုပ်ငန်းတာဝန်အလိုက်ထောက်ပံ့ကြေး ၄သောင်း+၊ နေ.စဉ်ခရီးစားရိတ်၁သောင်း၅ထောင်)-(အခွန်၊ပင်စင်၊ အာမခံကြေးတို.အတွက်လစဉ်ဖြတ်ငွေ၆သောင်း၅ထောင်)
အသားတင် တစ်လရငွေလစာ ၂၅၀၀၀၀
ဆက်သွယ်ရေးကုန်ကျငွေ (အိမ်လိုင်းဖုန်း၊အင်တာနက်) ၃.၀၀၀
အပြင်ထွက်စားခြင်း၊ အပျော်အပါး နှင့်လူမှုရေး ၈၀.၀၀၀
နံမည်ကစုဂဲဟာရာ့ စံ ပါ။
ဘွဲ.ရပြီးနောက် စာအုပ်ထုပ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာအချိန်ပိုင်းနဲ.၁နှစ်၊ သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေး ကုမ္ပဏီ အလုပ်မှာနှစ်ဝက်လောက်လုပ်ဘူးတဲ့ အတွေ.အကြုံရှိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မူကြို နဲ. သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေး အလုပ်နှင့်ပတ်သက်တဲ. စီးပွါးရေးအတိုင်ပင်ခံအလုပ်ကိုလုပ်နေတာ အခုဆို၎နှစ်နီးပါရှိပါပြီ။
တိုကျိုမှာတစ်ကိုယ်ရည်ဘ၀နဲ.နေလာတာ ၁၀နှစ်၊အားလပ်ရက်တွေမှာ ပါချင်းကို (Pachiko အကြွေစေ့သုံးပြီး ကစားတဲ.လောင်းကစားတစ်မျိုး) သွာကစားတယ်။ ရှင်းဂျုကု ဘူတာအရှေ.ဘက်အပေါက်ဘက်မှာ လမ်းလျှောက်လိုက်သောက်လိုက်နဲ. နေ.တဓူဝရဲ. စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြေဖျောက်ရင်းစုငွေ၂သိန်းခွဲလောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
လစာတွက်ချက်ပုံ (အခြေခံလစာ၂၆သောင်း)-(အခွန်၊ပင်စင်၊အာာမခံကြေးတို.အတွက်လစဉ်ဖြတ်ငွေ ၅သောင်း)
အသားတင် တစ်လရငွေလစာ ၂၁သောင်း
ဆက်သွယ်ရေးကုန်ကျငွေ (အိမ်လိုင်းဖုန်း၊အင်တာနက်) ၅၀၀၀
အပြင်ထွက်စားခြင်း၊ အပျော်အပါး နှင့်လူမှုရေး ၂၀၀၀၀
နံမည်က ရှီနိုးဘု စံပါ။
ဘွဲ.ရပြီးတော့ (System Engineer) စစ်စတမ်အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်ကို၃နှစ်လုပ်ပြီး ကုမ္ပဏီ ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကြော်ငြာလုပ်ငန်းကုမှာ ဒီဇိုင်နာ၊၊ သရုပ်ဖေါ်အလုပ်ကို ၂နှစ်နီးပါးလုပ်ပြီးနောက်အခုလက်ရှိမှာတော့ ပိုစတာနှင့် အင်တာနက်စာမျက်နှာဝက်ဘ်ပေ့ဂ်ျတွေကနေ ကြော်ငြာတွေကိုတီထွင်ဖန်တီးရတဲ. အလုပ်တာဝန်ကို ယူထားပါတယ်။ တယောက်ထဲနေတာ၈နှစ်တောင်ရှိပါပြီ။ တိုကျိုမှာနေပါတယ်။ ပန်းချီဆွဲရတာဝါသနာပါတဲ့ တွက် ကျောင်းသွားတက်နေပေမယ့် အလုပ်ကလည်းအလုပ်ရှုပ်လို. ကျောင်းပျက်တာ ခဏခဏပေါ.။ ကျောင်းလခကိုနှမြောလို.ကျောင်းကိုရပ်လိုက်မလားလို. စဉ်းစားနေတယ်။ အဲဒီကထွက်လာမယ့် ပိုက်ဆံကလည်း အ၀တ်အစားဝယ်တဲ့ဘက်ကို သွားဘို.များပါတယ်။ တော်တော်လေးတော့ အနေအထိုင် စေ့စပ်သူပါ။ လောလောဆယ် စုငွေက ဂျပန်ယန်းသိန်း၄၀လောက်လေ။
လစာတွက်ချက်ပုံ (အခြေခံလစာ၂၆သောင်း)-(အခွန်၊ပင်စင်၊အာာမခံကြေးတို.အတွက်လစဉ်ဖြတ်ငွေ ၄သောင်း)
အသားတင် တစ်လရငွေလစာ ၂၂သောင်း
အပြင်ထွက်စားခြင်း၊ အပျော်အပါး နှင့်လူမှုရေး ၃၀၀၀၀
အ၀တ်အစား၊ အလှအပစ္စည်း ၁၇၀၀၀
အလှပြင်စားရိတ် (မိတ်ကပ်၊ ဆံပင်ပြင်၊ လက်သည်းအလှ) ၁၅၀၀၀
ကျောင်းနှင့် ၀ါသနာအတွက်သုံးငွေ ၁၀၀၀၀
ကဲ၊ ဒါဆိုရင် မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက် သူ.ရဲ့ တစ်လတစ်လ အိမ်ကိုပြန်ပို.နေတဲ့ငွေပမာဏဟာ သူဘယ်လို ချိုးခြံနေထိုင်စားသောက်စုဆောင်းပြီး နေတယ်ဆိုတာကို လည်း သဘောပေါက်မယ်လို.ထင်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ (ကိုယ့်စားရိတ်နဲ.ကိုယ် ဂျပန်မှာကျောင်းတက်ပြီး မြန်မာပြည်ကို ပိုက်ဆံပို.တယ်ဆိုတဲ. ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေဟာဘယ်လောက်အထိ ကြိုးစားနေကြရသလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်လေ၊
မချီးကျူးပဲမနေနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာလေပါပဲ။ ဒီ့ထက်ပိုပြီး လေးစားရမှာကတော့ ဗီဇာအတုနဲ. အကြွေးတင်ခံလာပြီး အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်သူတွေနဲ. ၊ဗီဇာကုန်သွားတာတောင် မိသားစုနဲ.တိုင်းပြည်
အတွက် ဆက်လက်ကြိုးစားပြီးရုံးကန်ရပ်တည် နေနိုင်ကြသူတွေကိုပါပဲ။ စာဖတ်သူကော အဲဒီလို စဉ်းစား ဘူးမှာပေါ.နော်။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Thursday, August 13, 20090ကောင်းမွန်ဝင်းအတွက် ဤပို.စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Wednesday, August 12, 2009 1 ကောင်းမွန်ဝင်းအတွက် ဤပို.စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Tuesday, August 11, 20090ကောင်းမွန်ဝင်းအတွက် ဤပို.စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Friday, August 07, 20090ကောင်းမွန်ဝင်းအတွက် ဤပို.စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Thursday, August 06, 20090ကောင်းမွန်ဝင်းအတွက် ဤပို.စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Thursday, August 06, 2009 1 ကောင်းမွန်ဝင်းအတွက် ဤပို.စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Wednesday, August 05, 20090ကောင်းမွန်ဝင်းအတွက် ဤပို.စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း